Cunaqabataynta Ruushka La Saaray Oo Samayn Ku Yeelatay Saldhiga Hawada Sare Ee NATO – Borama News Network
Cunaqabataynta Ruushka La Saaray Oo Samayn Ku Yeelatay Saldhiga Hawada Sare Ee NATO
Madaxa wakaaladda hawada sare ee Ruushka Roscosmos ayaa Sabtidii ka digay in cunaqabataynta reer galbeedka ee ka dhanka ah Ruushka ay sababi karto burburka xarunta hawada sare ee caalamiga ah, wuxuuna ku baaqay in la qaado talaabooyinka ciqaabta ah.
Sida uu qabo Dmitry Rogozin, cunaqabatayntan oo qaarkood ka horreysey duulaankii Moscow ee Ukraine, waxay carqaladayn kartaa shaqada dayax gacmeedka Ruushka ee u adeegaya xarunta caalamiga ah ee hawada sare.
Natiijo ahaan, qaybta Ruushka ee saldhigga – oo gacan ka geysata hagaajinta wareegga – ayaa laga yaabaa inay saameyso, taasoo keenaysa in qaab-dhismeedka 500-tan uu ku dhaco “badda ama berriga,” madaxa Roscosmos ayaa ku qoray Telegram.
Rogozin, oo si joogto ah u muujiya taageerada ciidamada Ruushka ee Ukraine ee shabakadaha bulshada, ayaa sheegay in “qaybta Ruushku ay hubiso hagaajinta wareegga saldhigga (celcelis ahaan 11 jeer sannadkii), oo ay ku jiraan in laga fogaado qashinka bannaan.”
Wuxuu daabacay khariidad ku saabsan meelaha laga yaabo inay cilad ku timaado xarunta hawada sare ee caalamiga ah, wuxuuna tilmaamay inaysan u badnayn inay ku taal Ruushka.
Oo wuxuu sii waday, “Laakiin dadyowga dalalka kale, gaar ahaan kuwa ay hoggaamiyaan” eyda dagaalka “, waa inay ka fekeraan qiimaha cunaqabataynta lagu soo rogay Roscosmos,” isaga oo ku tilmaamay dalalka cunaqabatayntan ku soo rogay “waalli.”
Rogozin ayaa si lamid ah kor u qaaday halista saldhiga hawada sare ee hawada ku soo dhacaya bishii hore isagoo Twitter ku dhaliilay cunaqabataynta reer galbeedka.
1-dii Maarso, NASA waxay sheegtay inay isku dayeyso inay xal u hesho in Saldhigga Hawada Sare ee Caalamiga ah uu ku sii jiro wareegtada iyada oo aan gacan laga helin Ruushka.
Shaqaalaha iyo sahayda waxa loo qaadaa qaybta Ruushka dayax-gacmeedka Soyuz.
Laakiin Rogozin wuxuu sheegay in suufka loo adeegsaday duulista ay “ku xiran yihiin cunaqabateynta Mareykanka tan iyo 2021 iyo cunaqabateynta EU iyo Canada tan iyo 2022.”
Roscosmos waxa uu sheegay in ay ka codsatay NASA, Hay’adda Hawada Sare ee Kanada iyo Hay’adda Hawada Sare ee Yurub “in ay dalbadaan in la qaado cunaqabataynta sharci darrada ah ee ka dhanka ah shirkaddeena”.
Hawada sare ayaa ah meesha ugu dambeysa ee ka hartay halkaas oo Mareykanka iyo Ruushka ay sii wadaan iskaashiga.
Bilowgii bishii March, Roscosmos waxa ay ku dhawaaqday rabitaankeeda ah in ay mudnaan siiso dhismaha dayax-gacmeedyada milatariga iyada oo Ruushku isu arkayo in uu sii go’doonsan yahay natiijada dagaalka Ukraine.
Rogozin ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in Moscow aysan siin doonin matoorada Mareykanka ee gantaalada Atlas iyo Antares.
Waxa uu qoray: “Ha u fuuleen meel bannaan oo usha xaaqinka ah.”
30-ka Maarso, cirbixiyeenka Mareykanka Mark Vande Hee iyo labo cosmonauts, Anton Shkaplerov iyo Pyotr Dobrov, ayaa la qorsheeyay inay dib ugu soo laabtaan dhulka saldhigga hawada sare ee caalamiga ah iyagoo saaran dayax gacmeedka Soyuz.
Ruushka Oo Shaaciyay Tirada Xarumaha Milateriga Uu Ka Burburiyey Dowladda Ukraine
Madaxweynaha Puntland Iyo Qaramada Midoobay Oo Ka Wada Hadlay Dhameytirka Doorashada Socota
Bnnstaff Bnnstaff November 23, 2020
Ururka Suxufiyiinta Somaliland Ee Solja Oo War Ka Soo Saaray Xadhiga Wariye Coldoon
Dhibanayaal Sheegay In Dhul Boob Xoogan Lagu Haya Iyo Maamulka Gobolka Banaadir Oo Digniin Diray